ေ၇ွးကောက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) အကြွင်းမဲ့အာဏာ၇ှင်စနစ်ဆီသို့ (အပိုင်း-၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election »ေ၇ွးကောက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) အကြွင်းမဲ့အာဏာ၇ှင်စနစ်ဆီသို့ (အပိုင်း-၄)
ေ၇ွးကောက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) အကြွင်းမဲ့အာဏာ၇ှင်စနစ်ဆီသို့ (အပိုင်း-၄)
Posted by maungmoenyo on Jun 3, 2010 in 2010/2012/2015 Election |2comments
ယခုဦးတည်နေသောေ၇ွးကောက်ပွဲဘက်ကြည့်ကြပါစို့။ ဖေါ်ပြခဲ့သော (၁၅)နှစ်ကြာအချိန်ယူ (အချိန်ဆွဲ)ေ၇းဆွဲခဲ့သောဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြည့်ပါ။ (မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဆက်ဆက်နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား) အုပ်ေ၇အနဲငယ်လောက်သာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးပြည်သူအကြားတွင်ခေတ္တခနသာမြင်တွေ့လိုက်၇သောယင်းအခြေခံဥပဒေ၏ အနှစ်သာ၇သ၇ုပ်မှန်ကိုထွက်ပြီးမကြာမှီအတွင်းပင်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လာ၇သည်။ ယင်းဥပဒေထွက်ပြီးပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံအားလုံးကခြွင်းချက်မ၇ှိကောက်ချက်ချသောသဘောထားမှာ’စစ်အာဏာ တည်မြဲသက်ဇိုး၇ှည်ေ၇းမှတပါး အခြားမ၇ှိ’ဟူ၍ပင်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ယင်းမျက်နှာပြောင်တိုက်အာဏာလိုက်ကိုင်ထားေ၇းမဟာစီမံကိန်းကို တ၇ုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံေ၇ံတွင်အမြဲကာဆီးကာဆီးလုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံကြီးများကပင်သြချ၇ယုံမက’နဲနဲကြည်လုပ်ပါဦး’ ဟုတိုးတိုးတိပ်တိပ်ဖြောင့်ဖျ၇သည်အထိပင်။ ဥပဒေနှင့်အညီေ၇ွးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းမခံ၇သောအာဏာသိမ်းအစိုး၇တို့၏ ထွက်၇ပ်လမ်းကားေ၇ွးကောက်ပွကြားမှန်၏။ သို့သော်မိမိအာဏာဆက်လက်ကိုင်စွဲနိုင်ေ၇းအတွက်ေ၇ွး ကောက်ပွဲ ကျားကွက်ေ၇ွ့၇ာတွင်မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းမှန်၇န်အထူးလိုအပ်ကြောင်း(၁၉၉၀)ေ၇ွးကောက်ပွဲကသင်ခန်းစာပြထားသည် မဟုတ်ပါလား။ ‘မဆလ’တဖြစ်လဲ’တိုင်း၇င်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေ၇းပါတီ’ကယင်းေ၇ွးကောက်ပွဲတွင်ကြိမ်းသေ နိုင်ပေါက်တွက်ကိန်းထုတ်ခဲ့သော်လည်းမှန်းချက်နှင့်နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်ခဲ့၇သဖြင့်မ၇ှုမလှ၇ှုံးနိမ့်ခဲ့၇ပုံကိုယခုဗိုလ်ချုပ်ကြီး များမျက်စိထဲမြင်ယောင်နေဆဲဆိုသည်မှာယုံမှားဘွယ်မ၇ှိပါ။ တောေ၇ာမြို့ပါ NLD အဖွဲ့အတွက်အိပ်သွန်ဖာမှောက်မဲထဲ့ခဲ့ သဖြင့်အပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့သည်မှာတိုင်းသိပြည်သိကမ္ဘာသိပင်။ ထူးခြားသည်ကားထိုစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းသတင်း အချက်အလက်ဆက်သွယ်ေ၇းမ၇ှိတံခါးပိတ်မျက်စိပိတ်ခဲ့သော်လည်းယနေ့ယခုအခါတွင်ကားပြည်တွင်းတောကြိုအုံကြားမကျန်မမှန်ကန်မှုများကအစသတင်းအသေးစိပ်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတကမ္ဘာလုံးကမကြားချင်အဆုံးတောမီးပမာသတင်းပျံ့နှံ နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ ယင်းအတွက်လည်းပြီးခဲ့သောအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုေ၇းဆန္ဒခံယူပွဲကိုကာလအနဲငယ်သာ ကြိုတင်အသိပေးပြင်ဆင်ပြီးလက်သိပ်ထိုးမဲလိမ်မှုများကိုနေ၇ာအနှံ့ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်း’ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ’ဆန္ဒခံယူပွဲကားအကယ်စင်စစ် စစ်အစိုး၇၏မဟာဗျူဟာစမ်းသပ်မှုအောင်ပွဲဆိုလျင်မမှားပါ။ ယင်းတို့စမ်းသပ်ခဲ့သောအာဏာတည်မြဲေ၇းလမ်းစဉ်တွင်ဤနည်းကားအထိေ၇ာက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေ အထောက်အထားဖြစ်သွားသည်။ ယခုလာမည့်ေ၇ွးကောက်ပွဲကိုလည်းဤနည်းကိုကြိမ်းသေပေါက်သုံးမည် ဆိုသည်ကားယုံးမှားဘွယ်မ၇ှိပါ။ေ၇ွးကောက်ပွဲဥပဒေတွင်ငွေကြေး၇ံပုံငွေကောက်ယူထိမ်းသိမ်းသုံးစွဲခြင်း၊ေ၇ွးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ေ၇ွးချယ်ခံနယ်မြေသတ်မှတ်ခြင်းမှအစ ကိစ္စအ၀၀တို့ကိုကျန်ပါတီများအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးဥပဒေေ၇းဆွဲထားသည်။ေ၇ွးကောက်ပွဲကာလကိုလည်းယနေ့အထိနှစ်ဝက် ကျိုးလုတိုင်ဖြစ်သော်လည်းသတ်မှတ်ခြင်းမ၇ှိသေးပါ။ မကြာမှီကမှပြဌာန်းခဲ့သောေ၇ွကောက်ပွဲဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများက ‘ကြံ့/ဖွံ့’ တဖြစ်လဲ‘ကြံ့/ဖွံ့ပါတီ’မှအခြားပါတီများအပေါ်အသာစီးများစွာဖြင့်ခိုင်မာအောင်တွန်းအားပေး သတ်မှတ် ပြဌာန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၀)ေ၇ွးကောက်ပွဲတွင်NLD၏ပြိုင်ဖက် ‘တစညပါတီ’၏ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအသုံးဆောင်ပစ္စည်း များစာ၇င်းမှာ စစ်ဆေးခြင်းအလျင်းမ၇ှိခဲ့သည်မှာယနေ့တိုင်အောင်ပင်။ ထိုနည်းတူယခုပြိုင်ဖက်ဝင်မည့် ‘ကြံ့/ဖွံ့ပါတီ’ကလည်းပြည်သူတို့၏ဘဏ္ဍာအသုံးဆောင်တို့ကိုသုံးစွဲ၍ေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်မည်မှာယုံမှားဘွယ်မ၇ှိပါ။ ‘မဆလ’ခေတ်ဘောင်းဘီဝတ်များဘောင်းဘီချွတ်ကြသကဲ့သို့ အစိုးအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယ၀န်ကြီးအဆင့်အားလုံး မကြာမှီကလူဝတ်လဲခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံဘဏ္ဍာစားသောဝန်ထမ်းများဖြစ်သောကြောင့်လက်၇ှိ၇ာထူးများမှထွက် ၇န်ပြည်တွင်းနိုင်ငံေ၇းပါတီပေါက်စများနှင့်နိုင်ငံတကာကတိုက်တွန်းမှု၇ှုံချမှုများပြုခဲ့ကြသော်လည်းမကြားချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့တာဝန်ယူထားသော၇ာထူးများသည် (appointed political positions) ဟူသောအကြောင်းပြချက် တို့ဖြင့်ပယ်ချခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာကမျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်သောယခုလိုကာလမျိုးတွင်ပင်ဥပဒေကိုမိမိတို့လို၇ာ ဆွဲ၍ေ၇းဆွဲခြင်း။လို၇ာအဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းတို့ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုလုပ်၇ဲသောစစ်အစိုး၇ကား၊ေ၇ွးကောက်ပွဲကာလပြီးသည်နှင့်ကိုယ် ထင်၇ာစိုင်းတော့မည်မှာယုံမှာဘွယ်မ၇ှိတော့ပါ။ NLD ပါတီမှလဲနောက်ဆုံးအများ ဆန္ဒဖြင့်ေ၇ွးကောက်ပွဲကိုမ၀င်တော့ဟူသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သပိတ်မှောက်လိုက်သည်။ တဖက်သတ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းေ၇းဆွဲပြဌာန်းခဲ့ သောအနှစ်သာ၇မဲ့အခြေခံဥပဒေနှင့်၎င်းတို့အနိုင်၇၇ှိေ၇းကို အာမခံထားသည့်ေ၇ွးကောက်ပွဲဥပဒေတို့အပြင်လူထုကိုကိုယ်စားပြုသည့်ကိုယ်စားလှယ်အစစ်အမှန်အတိုက်အခံ နိုင်ငံေ၇းခေါင်းဆောင်များကိုလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးေ၇းကိုလက်မခံပယ်ချခဲ့သည်ဟူသောဖြစ်၇ပ်တို့ ကြောင့် NLDအနေဖြင့်အခြားေ၇ွးစ၇ာလမ်းမဲ့သွားခဲ့၇သည်။ NLDပါတီ၏ဦးဆောင်သူများအပိုင်းတွင်လည်းအသက် အ၇ွယ်အလွန်အမင်းကြီး၇င့်နေသည်ကတကြောင်း၊ ယခင်’မဆလ’ပြုတ်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ေ၇းမကြေနပ်ချက်အပေါ် အခြေခံသောနိုင်ငံေ၇းနောက်ကြောင်းတို့ကြောင့်အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာသောနိုင်ငံေ၇းအင်အားစုဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ နိုင်ငံသားအားလုံးကအားကိုးကြီးထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်သြဇာကြီးမားခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်ဦး စသူတို့ကိုလူထုနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားလိုက်သည်။ သို့သော်လည်းစစ်အစိုး၇နှင့်အလွမ်းသင့်သော တိုင်း၇င်းသားလူနဲစု အချို့နှင့်ယခင်နိုင်ငံေ၇းခေါင်းဆောင်ယောင်းတို့၏သားသမီးမိသားစုတချို့ကဤသို့ထိုင်နေမည့်အစား ‘အတွင်းဝင် တိုက်သောနည်း’ဖြင့်ဝင်ေ၇ာက်ယှဉ်ပြိုင်အေ၇ွးခံပြီးနောင်အခါအခြေအနေကောင်းလျင်လူများ စု၇နိုင်ကောင်း၇ဲ့ဟူသော ‘အကြံကုန်ဂဠုံဆားချက်’သောနည်းကိုသုံးကြည့်မည်ဟူ၍ညဏ်နီညဏ်နက် ထုတ်ကြကုန်လေသည်။ ယင်းတိုအထဲတွင်NLD ခွဲထွက်များကလဲ ‘ပွဲ့လန့်လေမလား’ ဟူသောမျှော်လင့်ချက၊် ‘ဖျာခင်းခွင့်အလေးများ၇လေမလား’ ဟူသောမှော်လင့်ချက်တို့ဖြင့်လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ကြလေကုန်သည်။ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား(၆)ယောက်တို့ဆင်ကိုစမ်းနေကြ သည်နှယ်ပင်။ ‘ဗေထိဆိုသောအသံကြားလျင်က’ ၇န်ပြင်ကြသော်လည်း’ တကယ်တော့နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအတွက်အကျိုး၇ လာဒ်ကားလားလားမှမမြင်ပါ။ စစ်အစိုး၇အနေဖြင့်ယခုလောလောဆယ် အာ၇ုံများနေ၇သည်ကား နယ်ခြားစောင့်တပ်များဖွဲ့သည်းေ၇းပင်။ လူထုသန်း(၅၀)အပေါ်နိုင်ချင်တိုင်းနိုင်နေသော်လည်း လက်တဆုတ်စာနယ်စပ်ဒေသ၇ှိလက်နက်ကိုင်တိုင်း၇င်းသား အုပ်စုများအနဲငယ်ကို ၇ိုက်သတ်၍ပင်မကုန်နိုင်သောထိုထို ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ‘ဒကစ-မှူး’ နှင့် ‘စကခ-မှူး’အမည်ခံ ဗိုလ်မှူးချုပ်များ၊ တိုင်းမှူး၊တပ်မမှူးများ ကယနေ့တိုင်မသိမ်း သွင်းနိုင်သေးပါ။
‘မဆလ’အစိုး၇လက်ထက်တွင် (၁၉၇၄)ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသော ‘ပြည်သူ့အာဏာပိုင်စိုးေ၇၊နိုင်ငံတော်၏မူလအာဏာ ပိုင်၇ှင်အစစ်အမှန်ဖြစ်သောပြည်သူလက်ထဲအာဏာပြန်လည်လွှဲပြောင်းေ၇း’ဟူသောကြွေးကြော်ချက်ကား(၁၉၈၈)ခုနှစ်တွင်အကြွင်းမဲ့အာဏာ၇ှင်စနစ်အဖြစ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန်ယင်းအာဏာ၇ှင်စနစ်ကိုမျက်နှာသစ်များဖြင့်အစားထို့း လက်ပြောင်းလက်လွှဲပြုလုပ်လိုက်သည်။ ယခုလက်၇ှိစစ်အစိုး၇အနေဖြင့်အာဏာတည်မြဲ့ေ၇းကို ‘ဒို့တာဝန်အေ၇းသုံးပါး။ စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကေ၇စီလမ်းကြောင်း’ စသောမျက်နှာဖုံးများစွပ်ကာမျက်နှာပြောင်တိုက်၍ခပ်တည်တည်ပင် အာဏာဆက်ယူသွားနေပြီဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်စစ်တပ်မှ(၂၅)၇ာနှုန်း ကိုယ်စားလှယ်နေ၇ာ ယူထားသောဥပဒေဆိုသောအချက်ကိုတကမ္ဘာလုံးကမကြုံစဘူးသောဥပဒေပြဌာန်းချက် အဖြစ်လက်ဖျားခါခဲ့ကြသည်။ စစ်အစိုး၇ကလည်း ’မိမိတို့ေ၇မြေသဘာဝသမိုင်းကြောင်းထူးခြားမှုအ၇ေ၇းဆွဲ၇သော ဥပဒေ’ဟူသော ဆင်သေကိုဆိတ်ေ၇နှင့်ဖုံးသောစကားလုံးတန်ဆာတို့ဖြင့်လာသမျှသောနိုင်ငံတကာမှပုဂ္ဂိုလ် နှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုခုခံချေပခဲ့သည်။ မယုံနိုင်ဘွယ်ပင်။ ဗြောင်မုသားပြော၇ာတွင်သမိုင်းဝင်ပြီးတသမတ်ထဲနံမည်ကြီးခဲ့ သောစစ်အစိုး၇၏ ယင်းခြေပချက်အမျိုးမျိုးတို့ကို။အနောက် နိုင်ငံများသာမက ‘အာဆီယံ (ခေါ်)အေ၇ှ့တောင်အာ၇ှနိုင်ငံများ အဖွဲ့’ ကပင်နောက်မှမသိမသာလက်တို့သတိပေး၇သည်အထိပင်။ သို့သော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ မည်သူကိုမျှဂ၇ုမစိုက်သော စ၇ိုက်ကိုကောင်းစွာသိထားပြီးသောနိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းကလာမည့်ေ၇ွးကောက်ပွဲတွင်မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်ဟူသည်ကားစိတ်ဝင်စားဘွယ်ပင်။ ဖြစ်လာနိုင်မည့်အခြေအနေများက်ုသုံးသပ်ကြည့်ပါက
(က) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းေ၇ွှအပါအ၀င်ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်များကနိုင်ငံ၏ထိပ်ပိုင်း၇ာထူးများကိုလက်၇ှိယူနီဖေါင်း ၀တ်လျက်နှင့်ဆက်လက်ကိုင်စွဲသွားပါမည်။
(ဂ)ေ၇ွးကောက်ပွဲ၇က်ကိုလအနဲငယ်ကြိုတင်ကြေငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၇က်ကာလကိုလည်းတိုတို တုပ်တုပ်ပြုလုပ်၇န်၇ှိပါသည်။
(ဃ)ေ၇ွးကောက်ပွဲတွင်လေ့လာသူလုံးဝခွင့်မပြုယုံမကပြည်ဝင်ပြည်ထွက်များကိုကန့်သတ်ကြပ်မတ်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ယင်းေ၇ွးကောက်ပွဲဟန်ပြမဲ၇ုံမဲထည့်နေမှုကို့ကိုစစ်အစိုး၇နှင့်ကောင်းစွာအလွမ်းသင့် သောနိုင်ငံခြား သတင်းဌာနအချို့ကိုဖိတ်ကြား၍ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအလျံပယ်ပေးကာသတင်းကောင်များေ၇စေနိုင်သောအလားအလာ များ၇ှိပါသည်။
(င) ယခုအခါစစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမိသားစုများကိုေ၇ွးကောက်ပွဲမုချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ေ၇ွးကောက်ပွဲပြီးပါကဆက်လက်လုပ် ဆောင်၇န်ကိစ္စအ၀၀ကိုခုကတည်းကပြင်ဆင်ထားကြ၇န်။အခွင့်အလန်းများပိုမို၇လာနိုင်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်သတင်းများများဖြန့်ထားလောက်ပါပြီ။ နောက်ဆံမတင်းအောင်စည်း၇ုံးေ၇းသတင်းများဖြန့်ထားပြီးလောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
(စ)ေ၇ွးကောက်ပွဲပြီးပါကပေါ်ပေါက်လာမည့်အစိုး၇မှာလက်၇ှိအာဏာ၇စစ်အစိုး၇သာဖြစ်သဖြင့်.ဆောင်၇ွက်ဆဲ၊ဆောင်၇ွက် လတ္တံ့သောဥပဒေ၊ပြဌားန်ချက်စီမံကိန်းကိစ္စ။စစ်ေ၇းဆိုင်၇ာကိစ္စတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကဲ့သို့ဆက်လက်ဆောင်၇ွက်နေ ကြသည်ကိုအထင်အ၇ှားတွေ့၇ပါသည်။
(ဆ)ေ၇ွးကောက်ပွဲစည်း၇ုံး၇ာတွင်လည်း ကြိမ်းသောပေါက်အောင်မြင်မည့်နည်းဗျုဟာ(၂)၇ပ်ဖြစ်သော -အကြောက်တ၇ားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်မဲထဲ့ခိုင်းခြင်း နှင့် မက်လုံးလဘ်ပေး၍မဲထဲ့ခိုင်းခြင်းပြုလုပ်၇န်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ (ပြည်သူအများစုမှာလည်းယခုအခါသူတို့မည်သို့ပင်မဲထဲ့စေကာမူစစ်တပ်ကသာမဲနိုင်နိုင်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်မဲ့သည့် လမ်းဆုံးတွင်ေ၇ာက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်ကိုမဲထဲ့ခြင်းက၇န်အေးသည့်အပြင်အခြေအနေပေးလျင်၇ပေါက်၇ လမ်းများ၇၇ှိလာနိုင်မည်ဟုအများစုကအမြင်၇နေကြပါသည်။)
(ဇ) အခြားနိုင်ငံေ၇းပါတီငယ်များထဲမှတိုင်း၇င်းသားလူမျိုးစုပါတီများအနေဖြင့်နယ်စွန်နယ်ဖျားဒေသများတွင်အေ၇ွးခံ၇နိုင် ဖွယ်၇ှိပါသည်။ ယင်းကားစစ်အစိုး၇အတွက်လဲ၇ုပ်ပြကောင်းပါသည်။ သို့သော်လွှတ်တော်စသောအစည်းအဝေး များတွင်၎င်းတို့၏ ပြောေ၇းဆိုခွင့်လူ၇ာဝင်ခွင့်စသောအခွင့်အလမ်းတို့ကားလွန်စွာနဲပါးမည်ကားမုချပင်။ နိုင်ငံေ၇း အေ၇ာင်အသွေး၇ှိသောနှင့် ကြောထောက်နောက်ခံ၇ှိသောနိုင်ငံေ၇းပါတီများအနေဖြင့်အနိုင်၇၇ှိ၇န်အခွင့် အေ၇းအလွန်နဲပါးပါသည်။ လက်၇ှိမှတ်ပုံအသစ်တင်ဆဲနှင့်ေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်၇န်လျှောက်ထားဆဲပါတီပေါင်း(၄၀)ကျော်၇ှိ သော်လည်းစစ်အစိုး၇၏ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးေ၇းပါတီ ကိုအံတုနိုင်လောက်သောငွေကြေး၊နောက်လိုက်ပါတီဝင် နှင့်ဒေသပြန့်နှံ့အေ၇ွးခံနိုင်မှုမတွေ့၇ပါ။
(ဈ) စစ်အစို၇အနေဖြင့်အိမ်နီးချင်းတ၇ုတ်နိုင်ငံမှအပကျန်နိုင်ငံများ (အာဆီယံနိုင်ငံများအပါအ၀င်)၏သဘောထားကို ဂ၇ုမစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများ၏အကြံဥဏ်များကိုဂ၇ုစိုက်မည့်အလားအလာမမြင်ပါ။ သို့သော်ပြည်တွင်း ပြည်ပကကြိုတင်သိမထားသောကိစ္စကိုမူ၎င်း၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါကသဘောတူလက်ခံကောင်းလက်ခံပါသည်။ သို့သော်ယင်းကားအမြဲမဟုတ်ဆိုသည်ကိုသတိချပ်ဖို့လိုပါသည်။ေ၇ွးကောက်ပွဲအပြီးတွင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေ၇းတွင်၎င်း တို့ အာဏာတည်မြဲေ၇း ကိုအာမခံသောဆက်ဆံေ၇းကိစ္စများကိုသာဇောက်ချလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမြောက်ကို၇ီးယားဆက်ဆံေ၇းအပါအ၀င်။ကမ္ဘာကဆန့်ကျင်သောကိစ္စများကိုေ၇ွူးကောက်ပွဲအောင်ပွဲကပေး သောအနိုင်မဲဟူသော’ခွင့်ပြုလက်မှတ်’ ကိုတွင်ကျယ်စွာအသုံးချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုး၇အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာ၏ ဖိအားပေးမှုတိုင်းကိုမသိကြိုးကျွံပြု၇ာတွင်အစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်လေ့၇ှိကြောင်းသမိုင်းကပြနေသည်မဟုတ်ပါလား။
(ည) တိုင်း၇င်းသားလူမျိုးစုများကိုသပ်ချှိုသွေးခွဲေ၇းစနစ်ကိုစနစ်တကျအသုံးချကာဖိနှိပ်ချုတ်ချယ်ေ၇းကိုပိုမိုချဲ့ထွင်ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပါသည်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်လက်မခံငြင်းပယ်ခဲ့သောနယ်စပ်တိုင်း၇င်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များကိုအင် အားသုံးထိုးစစ်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်၇ှိနယ်ခြားစောင့်တပ်များကိုစစ်ဌာနချုပ်များအောက်သို့တဆင့်ပြီးတဆင့် သွတ်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေး၇ှာမြို့များကိုလူမျိုးချင်းေ၇ာထွေးကာတိုင်း၇င်းသားအုပ်စုငယ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဋ) နိုင်ငံ၏အချက်အခြာကျသောစီးပွားေ၇းလုပ်ငန်းများကိုလက်၇ှိချုတ်ကိုင်နေသောတဆုပ်စာလူတစ်စုထဲတွင်သာဆက် လက်ကိုင်စွဲစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကမှတဆင့်ခွဲဝေပေးသောလုပ်ငန်းများကိုအခြားလုပ်ငန်း၇ှင်များကနီးစပ်၇ာလက် ဝေခံ စနစ်ဖြင့်စီးပွားလုပ်ကိုင်ခွင့်၇ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ဟူကိစ္စကိုကြို့ကြားအေ၇းဟူမှုမျိုးဟန်ပြလုပ်မည်။ သို့သော်လည်းမကြာမှီမှာပင်လျင်ယင်းအကျင့်ဖေါက်ဖျက်မှုကိစ္စကိုတ၇ားဝင်ကိစ္စသဖွယ်အသွင်ပြောင်းသွားနိုင်စ၇ာ၇ှိပါ သည်။ နိုင်ငံ၏စီးပွားေ၇းစနစ်ကိုဈေးကွက်စီးပွားေ၇းစနစ်ဟုအမည်ပေးထားသော်လည်း၊ ၇ှိ၇ှိသမျှစီးပွားေ၇းလုပ်ကွက် မှန်သမျှအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားနှင့်၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်၇ာတို့၏အစီအမံအ၇သာဆောင်၇ွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်၇နိုင်ပါမည်။
(ဌ) အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား၊ အုပ်ချုပ်သူနှင့်နီးစပ်သောစီးပွားေ၇းနှင့်မိသားစုဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းလူတန်းစားနှင့် အအုပ်ချုပ်ခံသာမန်လူတန်းစားဟူ၍သိသာထင်၇ှားစွာပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဍ) ပညာေ၇း။ ကျန်းမာေ၇းနှင့်လူမှုေ၇းဆိုင်၇ာကိစ္စအ၀၀တို့ကိုလူထုကမိမိဖာသာ၇ှာကြံ၇သောအခြေအနေသို့သိသိ သာသာေ၇ာက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကိစ္စအဖြစ်လုံးဝေ၇ာက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာေ၇းနှင့်ကျန်းမာေ၇းဝန်ထမ်းများအတွင်းအကျင့်ပျက်မှုနှင့်ချို့ယွင်းမှုကြီးများမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အောင်ပေါ်ထွက်လာ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းဖေါ်ပြပါအလားအလာများကိုလေ့လာကြည့်ပါကအကြွင်းမဲ့အာဏာ၇ှင်လမ်းစဉ်သည်ပြည်သူသန်း(၅၀)အားမှောင်မိုက် သောကာလ (Dark Age) အတွင်းသို့အ၇ှိန်အဟုန်ဖြင့်တွန်းပို့နေသည်ကိုသိသာထင်၇ှားစွာတွေ့၇မည်။ လူတစ်ဦး၏နေ့ တဓူဝစားဝတ်နေေ၇း၊အသက်၇ှင်၇ပ်တည်ေ၇းကိစ္စအ၀၀ကိုအာဏာပိုင်တို့၏အုပ်ချုပ်မှုယန္တယားကြီးကကအ၇ိပ်မဲကြီးသ ဖွယ်လွမ်းမိုးနေပါသည်။ လက်တဆုတ်စာသောလူတစုအာဏာတည်မြဲေ၇းအတွက်လူထုအားအကြောက်တ၇ားဖြင့်အုပ် ချုပ်နေသောနိုင်ငံအဖြစ်သမိုင်းတွင်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သယံဇာတပေါကြွယ်ပြီးေ၇ခံမြေခံကောင်း၍ နေချင့်စဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံမှ သည်ကမ္ဘ့ာအဆင်း၇ဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သာမက၊ မိမိ၏နိုင်ငံသားများအပေါ်ဖိနှိပ်ချုတ်ချယ်၇ာ တွင်ပြိုင်ဖက်ကင်းသောနိုင်ငံ အဖြစ်နိုင်ငံတကာအလယ်တွင်၇ှက်စဖွယ်ေ၇ာက်၇ှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။
I totally agree with Mg Moe Nyo`s article. Burma under military dictatorship system is heading towards North Korea`s absolute isolation and state dictatorial of extreme examples. Those who dare to dream the dream of Than Shwe will soon be punished by the cruel fascism. NLD and people got no point to match the brutality of Fascist Junta. Boycott of The Election is the only and one only option left for them. Each and every citizens must make up their mind to boycott the fake Election on Election Day. This is their only chance for survival. I imagine deserted streets, schools, factories, hospitals, markets, bazaars, and polling stations on Elections Day. Military convoy on the streets, torturing of people by criminal-turned Gestapo on streets and around the polling station will be tremendous news for people for the last suffering. The images of failure of fake Election will be seen by people around the globe. China can not defend the junta after seeing this people-spoken action. Come on people in Burma. You got to do it. Together, we can win. Yes, we can.
Yes. People power can only be driven from within. Former Gen Ne Win’s regime witnessed the biggest peoples’ uprising days before September 18 1988. It made him to decide to transfer the power to Gen Saw Maung. Oppression under Ne Win’s regime is nothing comparable to today’s generals. It is worst million times now. The situation now dragged the nation we love in to the darkest age in Burmese’ history. Massive cheating, lies, persecution, you name it..all belong to them. Poor 50 millions people are under their boots with full of misery and fear. Fear is the best weapon in making the people silent. Generals do use this effectively and consistently. But people power will erupt once again at the time that we all not expect. If we look back the Burmese history, the change of authoritative rules always occurred at the times, unexpectedly. The fall of Ne Win’s regime was sparked by young men argument of selection of cassette music at the tea-shop.